Natiijada doorashada Sweden oo soo baxday | Somaliska
Natiijada doorashada maanta ka dhacday Sweden ayaa soo baxday ayadoo inta badan ay ku soo baxday sidii la filaayay, xisbiga cunsuriga ayaa markii ugu horeysay soo galay baarlamaanka Sweden . Waa kanaa sida loo kala helay cododka 1. Xulufada talada haysa (Sida Moderates xisbiga Raysal wasaaraha) waxay heleen 49.2 % dhamaan cododka, waxay helayaan 172 kursi. 2. Xulufada mucaaradka (Sida Social demokraterna) waxay heleen 43.7% dhamaan cododka, waxay helayaan 157 kursi. 3. Xisbiga Cunsuriga ee Sveriges Demokraterna waxay heleen 5.7 dhamaan cododka taas oo ay ku helayaan ilaa 20 kursi oo barlaamanka Sweden. Baarlamaanka Sweden ayaa ka kooban 349 kursi. Xulufada raysal wasaaraha ayaan helin akhlabiyad ay ku sameyn karaan dowlad sidaa darteed waxay ku qasban yihiin in ay xiriir la sameeyaan xisyada kale, ayadoo raysal wasaaruhu uu sheegay in uu isku dayayo in uu ku soo daro xisbiga cagaaran xulufadiisa. Haddii kale wuxuu ku qasban yahay in uu la sameeyo xulufo xisbiga cunsuriga taasoo uu horey u sheegay in aysan macquul ahayn. Si kastaba ha ahaatee dadka khabiirada ku ah arimaha siyaasada ayaa sheegay in haddii raysal wasaarahu heli waayo cid uu la sameeyo xulufo akhlabiyad ah, lagu qasban yahay in doorasho cusub lagu dhawaaqo.
Natiijada doorashada Sweden oo soo baxday
Natiijada doorashada maanta ka dhacday Sweden ayaa soo baxday ayadoo inta badan ay ku soo baxday sidii la filaayay, xisbiga cunsuriga ayaa markii ugu horeysay soo galay baarlamaanka Sweden . Waa kanaa sida loo kala helay cododka
1. Xulufada talada haysa (Sida Moderates xisbiga Raysal wasaaraha) waxay heleen 49.2 % dhamaan cododka, waxay helayaan 172 kursi.
2. Xulufada mucaaradka (Sida Social demokraterna) waxay heleen 43.7% dhamaan cododka, waxay helayaan 157 kursi.
3. Xisbiga Cunsuriga ee Sveriges Demokraterna waxay heleen 5.7 dhamaan cododka taas oo ay ku helayaan ilaa 20 kursi oo barlaamanka Sweden.
Baarlamaanka Sweden ayaa ka kooban 349 kursi.
Xulufada raysal wasaaraha ayaan helin akhlabiyad ay ku sameyn karaan dowlad sidaa darteed waxay ku qasban yihiin in ay xiriir la sameeyaan xisyada kale, ayadoo raysal wasaaruhu uu sheegay in uu isku dayayo in uu ku soo daro xisbiga cagaaran xulufadiisa.
Haddii kale wuxuu ku qasban yahay in uu la sameeyo xulufo xisbiga cunsuriga taasoo uu horey u sheegay in aysan macquul ahayn. Si kastaba ha ahaatee dadka khabiirada ku ah arimaha siyaasada ayaa sheegay in haddii raysal wasaarahu heli waayo cid uu la sameeyo xulufo akhlabiyad ah, lagu qasban yahay in doorasho cusub lagu dhawaaqo.
Nin imaam isku sheegay oo nikaax u samaynaya lamaane dumar ah
Hogaamiyaha cunsuriyiinta oo aan markale lagu marti qaadin cashada Nobelka